Health Archives - Zomi Adventist Innkuan
Vaimim pen Tehuacan mualkuam, Mexico gam pan apiang khia hiding in taangthu kan mipil atam zaw in um uh hi. Olmec leh Mayans minam ten vaimim nam tuamtuam te Meso-America ah naciing in atuamtuam in nabawl nahuan thei khin uh hi. BC 2500 kim pawl ciang America ah na kizel khia hi. Kum zalom-15-16 […]
Zingsang thawh tungin tuilum tawh hun ut tantan kisilpen hoihlo hi.Kisil ciang satpiang nuh lualeng pumpi tungaphattuamna apia lungnote sisakin cii vun tungaathau datte kang’sak hi.Satpiang nuh ciang ciigim anamsak thei, le’nuai, kalkawm, tawbo kikal cihte satpiang limnuh in, tualo te apuatham in satpiang nuh leng hoihpen hi.Kisil laitak satpiang zat […]
One More Reason Pumpkin Seeds, Walnuts, and Lentils Are Good for You Non-indispensable amino acids are found to benefit cardiovascular health. By: Loma Linda University Health News, and Adventist Review Astudy conducted by researchers in California and France has found that intakes of amino acids largely consisting of indispensable amino acids, such as those found in […]
ELLEN G WHITE LE LAI SIANGTHO Zo Phualva Thupuak Vol 09, Issue 06, Sep 2019 Paul in Ephet 4:11,12 sungah “Tua hi a, amah in mi pawlkhatte sawltak ding, mi pawlkhatte kamsangathuahilh ding, mi pawlkhatte lungdamna thuatangko ding, mi pawlkhatte pawlpi sia le thuhilh sia dinginasuaksak hi. Pasian […]
Nung kha pan Azom: “Ahi zongin mi si a, amah maimang pah hi. Amah abeina tungta a, koi-ah om nawn ahi hiam? Job 14:10. Leitungami khempeuhte in, sih khit cianga mihingte ii omdan ding pen kithei nuam in, Khristian te lakah zong, sih khit ciangamihingte omdan athei thei dingin leitung ah […]
Eating Banana is Good for Health
Eat two bananas everyday till 1 month. What will happen? Watch and Practice for your health. ﻿
Caffeine notaNutrient, It’saDrug, says Experts
Although benefits of coffee drinking are often touted by media and scientists alike, 3rd Global Conference on Health and Lifestyle plenary speaker Ross Grant said that “caffeine doesn’t give you anything. It tricks the body into thinking you’re better, but it’s actually taking away.” “Caffeine is notanutrient,” he said. “It’sadrug.” Grant, […]
သွေးတိုး ရောဂါ ထိန်းသိမ်း နည်း(၇)ချက် ==================== ==================== သွေးတိုး ရောဂါသည် တိတ်တစ်စိတ် လာ၍ လူကို သတ်နိုင်သော ရောဂါကြီး တစ်ခု ဖြစ်သော် လည်း ကမ္ဘာ့ လူသားများ အားလုံး သွေးတိုးရောဂါ ရှိမှန်း မသိပဲ ရုတ်တရက် ရုတ်တရက် အသတ်ခံခဲ့ကြရ သည့် တိတ်တစိတ် လူသတ်သမားဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေရ သော ရောဂါကြီး၊ မဆန်းသော ရောဂါ ပင်ဖြစ်သည်။ များသော အားဖြင့် အစား အသောက်၊ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ရာမှ ရုတ်တရက် လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက် သွေးကြောပြတ် ၍သေဆုံးခြင်း တို့ကြောင့် အဖြစ်များ အသေများသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အသက် အရွယ်တွင်မဆို မိမိသွေးတိုးရောဂါ ရှိမရှိ ဂရုစိုက် ဆရာဝန်နှင့် […]
ကိုယ်အလေးချိန်လည်းလျော့ချလိုတယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး ကျစ်လျစ်လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခုဖော်ပြပေးမယ့်အိမ်လုပ်ဖျော်ရည်လေးတွေကို သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်နော်။အခြေခံလုပ်နည်းလေးတွေဖြစ်လို့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရသာလည်းအလွန်ရှိမှာပါနော်။ သခွားသီးအဆီကျဖျော်ရည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ သခွားသီး – ၁ လုံး နံနံပင် – လက်တစ်ဆုပ်စာ သံပုယိုသီး – ၁ လုံး ဂျင်း (ထောင်းပြီးသား) – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အရည် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ရေ – ခွက်တစ်ဝက်ခန့် ပြုလုပ်ပုံ ဖော်ပြထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းအကုန်လုံးကို အရည်ညှစ်ပြီး အိပ်ရာမဝင်ခင်သောက်သုံးပေးပါ။ တစ်လသောက်ပြီး တစ်ပတ်နားပေးကာ လိုအပ်လျှင် ပြန်စပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂရိတ်ဖရုနှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်ဖျော်ရည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဂရိတ်ဖရုအရည် – ၅၀၀ မီလီလီတာ စပါကလင်ရေ – ၅၀၀ […]
PASIAN IN CIHTAKNA THUPHA PIA
Zo Phualva Thupuak, Vol 09, Issue 04, July 2019 I Topa in “Kei hong pahtawite ka pahtawi ding hi…” ci hi (1 Samuel 2:30). Kum 100 tampi khit ciangin zong Laisiangtho sunga Pasian kammal pen kikheel nai lo a, tuni dongin tangtung- tung lai hi. Pasian kammal ahi “Pasian aw za inathu mang […]
ခုနစ်ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ပေါင်အထိ သိသိသာသာ ကျဆင်းနိုင်တဲ့နည်း
အခုဖော်ပြမယ့် နည်းလမ်းဟာ ကနေဒါနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်း ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီး သကြားစွဲလမ်းတဲ့ အခြေအနေကို အနိုင်ယူကာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူတွေ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သကြားဓာတ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း နေရာအနှံ့မှာ ရှိနေရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဓာတုလုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းလဲသွားပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထဲ အဆီတွေ တွယ်ကပ်နေသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တွင်းမှာ သကြားတွေ စုဆောင်းမှု မရှိအောင် Detox လုပ်ရပါမယ်။ Detox လုပ်တာကြောင့် တစ်ပတ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ပေါင်အထိ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။၁။ သန့်ရှင်းတဲ့ အစာနဲ့ စတင်ပါဆိုလိုတာက သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့ အစာတွေဖြစ်ပြီး ဘာမှ မပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကြက်ဥ၊ ငါး၊ ကြက်သား၊ မြက်စားနွား၊ အခွံမာသီး၊ […]
ဂေါ်ဖီကို ဖျော်ရည်လုပ်ပြီးသောက်ရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
အခုပဲ ဂေါ်ဖီ_ဖျော်ရည်ကိုသောက်သုံးလိုက်ပါ ဂေါ်ဖီကို ဖျော်ရည်လုပ်ပြီးသောက်ရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက အံ့မခန်းပါပဲ။ ဂေါ်ဖီဖျော်ရည်ကို အရသာရှိအောင် အလွယ်တကူ ဖျော်သောက်လို့ရမဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေး၊အလှအပ အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အစာအိမ်နာတာတွေအတွက် ဂေါ်ဖီဖျော်ရည် ဂေါ်ဖီမှာ ပါတဲ့ အချွဲဓါတ်က အစာအိမ်နဲ့ အစာချေအမြှေးပါးနံရံတွေကို အနာကျက်စေပါတယ်။ အနောက်တိုင်းကျန်းမာရေးဂျာနယ်က ထုတ်ပြန်တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ အစာအိမ်လူနာ ၁၃ ဦးကို ဂေါ်ဖီဖျော်ရည်နဲ့ ကုသပေးခဲ့ပြီး အဲဒီလူနာတွေဟာ တခြားလူနာတွေထက် ၁၀ ရက်ပိုပြီး ဝေဒနာသက်သာလာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂။ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးအတွက် ဂေါ်ဖီဖျော်ရည် ဂေါ်ဖီကို အများအပြားစားသုံးတာဟာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်တာကို သင်သိပါသလား။ နိုင်ငံတကာ ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာ ဂျာနယ်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာတော့ဂေါ်ဖီဟာ_ရင်သားကင်ဆာကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီလို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားသုံးတာဟာ […]
Zunkhum Dalna Zatui
ZUNKHUM NEI IN NA LUNG KHAM HIAM? Zomi u leh nau Zunkhum nei in sih ding na ngawn patau in na om kha hiam? Na innkuanpih na sanggam u le nau khua leh tui te in zunkhum nei in beidong inaom hiam? Hih lai na sim inla na hilh in. Sum tampi bei […]
Lungtang Sihui neu leh awmbing awmciak neite ading zatui hoih Vanzat ding – Lenmui teh, Khuaizu, Ci Amasa in Lenmui teh khut kilhkhat tui tawh sawp siang in. Tua khit ciang gawizan inla atui kuanguk lang ngah dong suuk in. Tua lenmui tui sungah khuaizu annek siik-keu khat khah inla dawn in. (Sikhang naneih kei […]